काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । भनिन्छ– बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ः३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र राजधानीबासीलाई नयाँ बिहानीको सन्देश दियो ।
लामो दौडको घोडा जस्तै, अनेकन हण्डर र ठक्कर खाएर सफलताको उचाइमा पुगेका व्यवसायी ढकालका लागि आजको जीत सफलताको उचाइको अर्काे एउटा खुड्किलो बनेर खडा भयो । अनि हरेक बिहानीपख नयाँ आशाहरुको खोजीमा हिँड्ने मानिसजस्तै उनको यो बिहानीको जितले पनि नेपालको उद्योग, व्यवसायका क्षेत्रमा नयाँ आशाहरुको सञ्चार गर्नसक्ने आशा जन्मायो ।
त्यसैले यस यात्राले ‘वेटिङ प्रेसिडेण्ड’ अर्थात्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको २०औँ अध्यक्षका लागि उनको मार्ग प्रशस्त भएको छ, उनका लागि । महासंघको विद्यमान विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नै हालका अध्यक्ष भवानी राणालाई व्यवसायी शेखर गोल्छाले विस्थापित गर्न लागेका छन् ।
ढकालको उद्यमशीलताको यात्रा धेरै पुरानो छैन, करिब साढे दुई दशकको मात्र हो । छोटो समयमा देशको उद्यम, व्यवसायमा प्राप्त भएको यो सफलताको रहस्य के हो ? उनको विगत जान्नेहरुले नै र पछिल्ला केही वर्षहरुमा देशका सञ्चारमाध्यमहरुले सोध्ने प्रश्न हो यो । उनको सदैव स्वाभाविक उत्तर रहने गर्छ- लगाव, इमान्दारिता र परिश्रम । ढकाल स्वीकार्छन्– मेरो सफलताको सबैभन्दा दरिलो टेको भनेको लगाव र परिश्रम नै हो ।
अहिले उनी आइएमई समूह, ग्लोबल आइएमई बैँक, चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलगायतका नेपालमा परिचित कैयौँ यस्तै अरु व्यवसायको अध्यक्ष हुन् । अरु सामाजिक सङ्घसंस्थाको संलग्नता त छँदैछ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय, सेवालगायत जलविद्युत्का क्षेत्रमा पनि उनीहरुको ओझपूर्ण उपस्थिति रहेको छ ।
नेपालको व्यवसायमा बहुआयामिक क्षेत्र समेट्दै अघि बढेका उनी सबैलाई परिश्रम नै गर्न सिकाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसारको अरु भूगोलका तुलनामा हाम्रो माटो धेरै बढी मलिलो छ । यहाँ जे रोपे पनि सुन फल्छ, तर यसले मेहनेतको अपेक्षा भने गर्छ । मत भन्छु, हामी आफैँ माटो रोपेर सुन फलाउन सक्छौँ, अन्त कतै भौँतारिनु पर्दैन ।’
हो, यस्तै सफलता र मेहनतले ढकाल अब एक उद्यमी मात्र होइन कि निजी क्षेत्रलाई उद्यममैत्री नीति निर्माणका लागि देशको समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा र छाता संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
‘आफूले यस देशमा एउटा सानो पसलदेखि ठूला कर्पाेरेट हाउसम्मको नेतृत्व गरेकाले देशका सानादेखि मझौला हुँदै ठूला व्यवसायका समस्या र आवश्यकताको बारेमा म अरुभन्दा बढी नै जानकार छु जस्तो लाग्छ अब मैले यीनै समस्याहरुको पैरवी गर्ने हो, मुलुकको समृद्धिको लागि राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई बढावा दिने हो,’ आइतबार बिहान संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
हालसम्म निजी क्षेत्रको यस छाता सङ्गठनमा १८ जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन् । महासंघको अध्यक्षबाट विदाई हुन लागेकी भवानी राणा यो संस्थाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला भइन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले १९औँ नेतृत्वका रुपमा शेखर गोल्छा खडा भएका छन् । आजको मत परिणामपछि कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु नपरेका ढकालले महासङ्घको २०औँ अध्यक्षका रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
रासससँगको कुराकानीमा केही समयअघि ढकालले भनेका थिए, ‘मानिसलाई कतिपय अवस्थामा नसोचिएको सफलता पनि हात लाग्छ अथवा केही नसोचिएका कुराहरु पनि हुन सक्छन् । तर पनि ती सबै नराम्रा पनि त हुँदैनन् ! जे हुन्छ राम्रै हुन्छ ।’ तर उनको अहिलेको यो सफलता भन्दा वास्तविक पारिवारिक जीवन निकै पर थियो । तर आज बिहान भने त्यो सबै स्मरण गर्ने फुर्सद उनीसँग थिएन ।
उनले एउटा बालकका रुपमा आफ्नो बुवाको माया र सुखद् भविष्यको सपना चाहिँ देख्न नसकेको घटनालाई भने जस्तै हतारमा पनि भुल्दैनन्। बुबाले छोडेर गएपछि सोह्र वर्षको एक किशोरको काँधमा आइलागेको परिवारको जिम्मेवारीले पनि उनलाई भविष्यप्रति बढी जिम्मेवार हुन सिकाएको होला ।
उनी भन्छन्, ‘त्यो उमेरमा मेरा आँखा अगाडि एउटैमात्र सपना आएको हो- जस्तोसुकै मूल्यमा पनि अब आमा र भाइबहिनीलाई दुःखबाट टाढा राख्नुपर्छ, जीवनमा केही गर्नुपर्छ ।’ तर उपाय के होला ? त्यो बाल मष्तिष्कले सोच्न सक्ने कुरा पनि भएन । तर पनि त्यो आत्मबल र परिश्रमले त्यो सपना आज साकार भएको उनी ठान्छन् ।
“यही समस्याको हलका लागि हामीले हाम्रो अनुभवलाई टेकेर ‘इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेश’ (आइएमई) खोल्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकसँग गर्‍यौं, जुन सफल पनि भयो । त्यही आइएमई अहिले नेपालको ‘मनी ट्रान्सफर’ को पर्यायबाची हो भन्दा फरक पर्दैन । उनी भन्छन्, ‘अहिले मानिस पैसा पठाउन कुनै बैंकमा या अन्य मनी ट्रान्सफर कम्पनीमा पुगेका भए पनि ‘आइएमई गरिदिनुस्’ भन्ने गरेको सुनिन्छ, सफलता भनेका यस्तै यस्तै काम त होलान्, जे होस यो पनि मुलुकका लागि केही गर्यौँ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव छ ।’
‘रेमिट्यान्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्युरेन्स, अटोमोबाइल, ऊर्जा, पर्यटन, विद्युतीय भुक्तानी, ट्राभल, सूचना–प्रविधि, केबलकार र हस्पिट्यालिटीलगायत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आइरहेको छ । यी सबैको जगको ढुङ्गा आइएमई नै हो,’ उनको निष्कर्ष छ ।